Headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro tsy misy vidiny mihoatra ny 36 Euros | Androidsis
Androany aho te-hampiseho anao amin'ny antsipiriany, na dia miaraka amin'ny fanampian'ny horonan-tsary Review, izay rehetra atolotray anay mahafinaritra ireo Fampandrenesana tsy misy tariby Olixar X2 Pro. Headset izay efa nohamarininay tsara hanome anao ny hevitray tena marina fa tsy misy fepetra, na dia ireo manaraka rehetra aza Androidsis ary fantatro manokana fa tsy manambany teny aho ary manome anao ny hevitro faran'izay marina indrindra momba ireo vokatra izay andrana Androidsis avy eto hanome anao ny fiheveranay momba izany.
Amin'ity tranga ity, na dia tiako atao aza izany dia tsy afaka milaza zavatra ratsy momba ireo headphone tsy misy tariby mahafinaritra ireo aho. Olixar X2 Pro miaraka amin'ny teknolojia Bluetooth 4.0 sy ny mifanentana amin'ny NFC. Headphones sasantsasany izay efa nosedraina nandritra ny herinandro teo ary isaky ny mandalo aho dia talanjona kokoa noho ny kalitaon'ny feo sy ny fananganana azy ireo, ary izany rehetra izany dia tsy azo resena vidiny antsinjarany 35,99 Euros ihanyFantatrao izao, raha te hahalala bebe kokoa momba ny hevitro marina momba ireo headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro ianao dia manoro hevitra anao aho mba tsindrio «Tohizo ny famakiana ity lahatsoratra ity».
1 Olixar X2 Pro Wireless Wireless Headphones
2 Tsara indrindra amin'ny headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Olixar X2 Pro
Olixar X2 Pro Wireless Wireless Headphones
modely X2 Pro
Conectividad Bluetooth: Version 4.0 (A2DP 1.2-AVRCP 1.4-HSP 1.2-HFP 1.6)
Faritra RF 10 metatra
Valiny matetika 60Hz-20KHz
Herin'ny mpandahateny 20mW
bateria Ionan'ny lithium azo havaozina
fizakantena Famerenana mozika 10 ora
Fotoana fiampangana 2'5 Ora
lafiny 172 X 190 X 69mm
vidiny 35'99 Euros en mobilefun.es
Tsara indrindra amin'ny headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro
Anisan'ireo lafiny tsara hanasongadinana ireo headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro, ankoatr'izay ny tahan'ny kalitao / vidiny miavaka, tsy azo resena amin'ny fari-piainany, dia ilaina ny manonona ireto manaraka ireto:
Relationship kalitao / vidiny tsy azo resena eo amin'ny faritra misy azy.
Fitaovana fanamboarana avo lenta ary miaraka amin'ny endrika maoderina sy kanto.
Herin'ny feo lehibe misaotra ny fanamafisam-peo 20mW.
Pairing mora noho ny teknolojia NFC amin'ny fanatonana akaiky kokoa ilay fitaovana fotsiny.
Anisan'izany ny mikrô handraisana sy hanaovana antso an-tariby amin'ny telefaona, antso WhatsApp, Skype, Line, Hangouts ary ny toy izany eo amin'ny bokotra iray.
Ny batterie azo ampiasaina indray izay ahafahantsika mitendry mozika mitohy hatramin'ny 10 ora mizaka tena.
Ahitana tariby micro USB mamaly sy tariby Jack 3,5 mm ho an'ny fifandraisana amin'ireo fitaovana tsy manana fifandraisana Bluetooth.
Ny ratsy indrindra amin'ny Olixar X2 Pro
Ny marina dia tsy hitako izay lesoka tamin'ireny manaitaitra ireny Fampandrenesana tsy misy tariby Olixar X2 Pro, na dia hametraka lafy vitsivitsy aza dia azontsika lazaina ny elongation ambany izay tsy mamela antsika ho afaka mitafy azy tsara amin'ny tendantsika rehefa tsy ampiasaintsika izy ireo, satria tsy manodidina ny vozontsika manontolo dia mijanona eo afovoany na kely kokoa nefa tsy miaraka ny headphones roa hahafahanao mitafy azy ireo amin'ny fomba milamina sy malalaka kokoa.
Etsy ankilany, tsara koa ny manonona izany tsy manana arofenitra rindrina elektrika tafiditra ao anaty boaty, na dia headphones azontsika atao aza ny maka azy amin'ny alàlan'ny USB port amin'ny solo-saintsika manokana, ity, farafaharatsiny ho ahy dia ratsy kely kokoa, ary betsaka kokoa raha mihevitra isika fa misy charger an'ny smartphone Android antsika dia hanampy antsika handoa azy ireo haingana avy amin'ny tariby mandeha amin'ny herinaratra.
Fifandraisana Bluetooth 4.0 sy NFC
Tsy misy lozika rindrina
Kely elongated hitafy azy ireo amin'ny vozony rehefa tsy ampiasaintsika izy ireo
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Fitaovana hafa » Notsapainay ny headphones tsy misy tariby Olixar X2 Pro, headphone misy kalitao amin'ny 35,99 Euros ihany
Inona no miandry antsika ao amin'ny Minecraft Pocket Edition 0.12